Podcast 13 × 09: Nhau dzakawanda kwevhiki | Ndinobva ku mac
Podcast 13 × 09: Nhau dzakawanda kwevhiki
Musvondo rino podcast tinotaura nezve zvimwe zvezvizhinji zvitsva zvinoratidzwa nekambani yeCupertino mazuva ano. Chokwadi ndechekuti mwedzi yekupedzisira yegore inowanzonakidza uye ine simba paApple Zvese zvevashandisi uye nekambani pachayo, isu hatipedzi chiitiko kana chiziviso chesevhisi kana vhezheni nyowani yekushandisa system yasvika kwatiri ...
Nezuro manheru takakurukura zvakati wandei zvezvitsva zvakaunzwa nefemu mumazuva ano. Senguva dzose isu takaendawo "kutenderera negwenzi" mune zvimwe zvinhu asi icho chinhu chakajairika matiri. Isu tinogovana Podcast vhidhiyo nezuro kuti takagara pane yedu YouTube chiteshi:
Ichi ndicho chinongedzo chekuti iwe upinde yedu YouTube chiteshi uye kuti iwe unogona kutiteverera mune inotevera episode gara kana iwe unogona kunakirwa nepodcast yakaburitswa mu iTunes nokuti teerera pairi chero nguva uye chero kwaunoda.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana mazano uye iwe uchifunga kuti tinogona kutaura nezvazvo pane podcast iwe unogona kuzviita kurarama kuburikidza nehurukuro inowanika paYouTube, uchishandisa hashtag #podcastapple pa Twitter kana kubva teregiramu yedu chiteshi Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ndeye mahara kune wese munhu uye isu tiri vakawanda uye vazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Podcast 13 × 09: Nhau dzakawanda kwevhiki
Iyo itsva MacBooks Pro uye AirPods 3 inowanikwa muzvitoro zvakawanda zveApple
Apple Watch Challenge vachipemberera Veterans Day